Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Hay’adda HADEF oo yeelatay Website u gaar ah (HADEF.ORG)
Hay’adda HADEF oo yeelatay Website u gaar ah (HADEF.ORG)
Hay’adda samafalka ee magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano HADEF oo ay sameeyeen aqoonyahano kasoo jeeda Deegaanka Soomaalida kuna nool waddanka Maraykanka ayaa waxey yeelatay Website hadda kadib lagala socon doono arimaheeda u gaarka ah iyo kolba meelaha ay samafalka ka bixineyso. Hay’addan oo ka sharciyeysan waddanka Maraynkanka gaar ahaan gobolka Minesoto ayaa waxay qorshaheedu yahay inay caawiso bulshada ka kasoo jeeda geeska Afrika ee ku nool dalka Maraykanka iyo dadka iyagu ku nool geeska Afrika.
Ujeedada ugu weyn ee hay’addan loo aasaasey ayaa ahayd kadib markii aqoonyahanadi ay dareemeen baahida umadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka ay ugu baahan yihiin hay’ad noocan oo kale iyagoo sidoo kale aan marnaba maskaxda ka bixinin baahida noocyada badan ee ay qabaan Soomaalida ku nool geeska Afrika sida EThiopia, Somaliya iyo Kenya.
Hay’addan ayaa ku hawlan sidii ay caawimaad dhaqaale, mid waxbarasho iyo mid caafimaadba uga gaysan lahayd dadyawga ku nool geeska Afrika iyadoo bilihii lasoo dhaafey raashin deeq ah gaadhsiisay dad gaadhaya 130 Qoys oo ku nool tuulada Huurso oo ka tirsan gobolka Sitti.
Guddoomiyaha hay’adda HADEF Mukhtaar Sheekh Yuusuf ayaa sheegey in hay’addani ay marxalado badan soo martay balse ay hadda diyaar u tahay iney waxbadan oo taakuleyn ka geysan doonto walaalo badan oo ubaahan isagoo sheegey iney mashaariic ka fulin doonaan Deegaanka Soomaalida Ethiopia la xiriira dhanka waxbarashada iyo caafimaadka
Hay’addan ayaa hadda waxii ka danbeeya aad kala socon kareysaa Websitekeeda oo ah. www.hadef.org